मेरो बिहे किन हुदैन ? के गर्ने होला? – Sidha Post 24
एजेन्सी । अहिले एउटा समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । एक रुसी महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई डिभोर्स दिएर आफ्नै सौतेनी छोरासँग विवाह गरेकी छन् । यो घटना रुसको मस्कोको हो ।
महिला रुसी ब्लगर हुन् । उनको नाम मरीना बलमशेबा रहेको छ । उनले गत वर्ष श्रीमानसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर आफ्ना सौतेनी छोरा भ्लादिमिर शेवरनसँग विवाह गरेकी हुन् ।
३५ वर्षीया मरीना बलमशेवाले श्रीमान एलेक्सी ऐरेसँग २००७ मा विवाह गरेकी थिइन् । उनले यसअघि नै ४ जना सौतेनी छोराछोरीलाई काख लिएकी थिइन् ।
जिम्बावेका स्वास्थ्यमन्त्री डेभिड परिरेन्यात्वाले चीनमा बनेको क,ण्डम अफ्रिकी मुलुकका पुरुषहरुका लागि निकै सानो भएको बताएका छन् ।
राजधानी हरारेमा आयोजना गरिएको एचआईभी र ए:ड्स रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री डेभिडले अफ्रिकाको दक्षिणी क्षेत्रमा यौनजन्य रोगको संक्रमण उच्च रहेको र आफुहरुले क;ण्डम प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको उल्लेख गरे ।
अब साँघुरा चीनियाँ क:ण्डमको साटो जिम्बावेकै कम्पनीहरुले आफ्ना नागरिक र पर्यटकका लागि क:ण्डम उत्पादन गर्नुपर्ने र स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको तर्क छ । जिम्बाबेका १३.५ प्रतिशत प्रौढ जनसंख्या ए:चआ:ईभी/ए:ड्सबाट संक्रमित छ ।
सब-सहारा-अफ्रिकामै यो सबैभन्दा ख:राब दर हो ।
अहिले आफुहरुले अफ्रिकी क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको र भविष्यमा समस्या नहुने री विभिन्न प्रकारका ठूxला साईजका कxण्डम उत्पादन गरिने झाओले बताए ।विश्वका हरेक देशबाट फरक–फरक आकारका कxण्डम माग हुने चीनियाँ उत्पादकहरुको भनाई छ ।
चीनियाँहरुले पातलो कxण्डम प्रयोग गर्ने र अमेरिकनहरुले नरम कxण्डम प्रयोग यी कम्पनीहरुले जानकारी दिए । प्रतिवेदनहरुका अनुसार चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कxण्डम उत्पादक हो, जसले बार्षिक तीन अर्ब गोटा कxण्डम बनाउने गर्छ । अहिले चीनमा झन्डै ३०० वटा कxण्डम उत्पादक कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । एजेन्सी